GMDQ oo dhallinyarada Dhuusamareeb kala qeyb galay kal-fadhi weydiimo iyo warcelin ah – GMDQ
GMDQ oo dhallinyarada Dhuusamareeb kala qeyb galay kal-fadhi weydiimo iyo warcelin ah
Wafdi ka socda GMDQ oo ay hoggaamineyso guddoomiye Xaliimo Yarey oo dhowrkii cisho ee la soo dhaafay joogay Dhuusamareeb ayaa joogiddoodii magaalada kusoo afmeeray kulan ay la qaateen xalay dhallinyarada magaalada.
Kulankaan oo ay kasoo qeyb galeen dhallinyaro ka badan 100 ayaa u badnaa su’aalo la xiriira doorashooyinka oo la weydiinayay guddoomiye Xaliimo, commissioner Saciid iyo sharci yaqaan Cabdikariim. Su’aalihii ay soo jeediyeen dhallinyaradu ayaa dhammaantood looga jawaabay si faahfaahsan oo ay ka qeyb galayaashu u riyaaqeen.
Kasoo qeyb-galayaasha ayaa waxa ka muuqatay heellanaan iyo baahi weyn oo ay u qabeen xogta la xiriirta doorashooyinka 2020ka iyada oo Guddigu u ballanqaaday in barnaamijyo wacyi gelin laga hirgelin doono deegaanka iyo guud ahaan waddanka si dadka Soomaaliyeed xog u helaan; Barnaamijyadaas oo uu hoggaamin doono xafiiska Guddiga ee qaadashada shaqaalihiisa uu Guddigu u tegay Dhuusamareeb.
Wafdigii Guddiga ayaa Isniinta ku laabtay Muqdisho iyada oo ay usoo hirgaleen u jeeddooyinkii safarkooda Galmudug.
Waxaa la faafiyey March 12, 2019 March 12, 2019